ROBO: Otu ndị ahịa azụ taa si eme n ’ọnlaịnụ na zụta ihe na-anọghị n'ịntanetị | Martech Zone
Ọ bụ ezie na anyị na-aga n'ihu na-eme nnukwu ihe site na uto nke ahịa n'ịntanetị, ọ dị mkpa icheta na 90% nke ịzụrụ ndị ahịa ka na-eme na ntaneti mkpọsa. Nke ahụ apụtaghị na ịntanetị enweghị mmetụta dị ukwuu - ọ nwere. Ndị na-eri ihe ka chọrọ afọ ojuju nke ile anya, imetụ aka na ịnyagharị ngwaahịa tupu ị kwụọ ụgwọ ya.
ROBO abụghị ihe ọhụrụ, mana ọ na-abụ ụkpụrụ na njem ịzụ ahịa ndị ahịa na nnukwu ohere maka ụdị na ndị na-ere ahịa ka ha ghọta nke ọma etu ndị ahịa ha si azụ ahịa.
Kedu ihe ROBO Kwuru?
Nyocha na Ntanetị, Zụta ihe na-adịghị n'ịntanetị
Kedu ihe bụ ROBO?
ROBO bụ omume ndị na - azụ ahịa ebe ha na - eji ọdịnaya ndị na - azụ ahịa eme ihe dịka nyocha, post blọgụ na vidiyo iji nyere aka zụta mkpebi ha. Ozugbo ha kpebiri, ha anaghị azụta ntanetị - ha na-aga nleta ụlọ ahịa ma na-azụ ahịa.
Bazaarvoice nyochara omume ndị ahịa site na 20 + nke ndị na-ere ahịa ụwa na North America, EMEA, na APAC, gafere 100 nke ụdị na edemede iji ghọta oge mgbe ndị ahịa na-achọ ọdịnaya ndị ahịa (CGC) tupu ịzụta ihe n'ịntanetị ma ọ bụ na ụlọ ahịa, na ha infographic na-ekenye nchoputa, gụnyere:
39% nke ndị na-azụ ahịa n'ime ụlọ ahịa na-agụ nyocha ntanetị tupu ịzụta
45-55% nke ndị na-azụ ahịa ụlọ ahịa na-agụ nyocha nke ihe teknụzụ tiketi nnukwu
58% nke ndị na-azụ ahịa ụlọ ahịa na-agụ nyocha maka ahụike, ahụike na ihe ndị mara mma
N'ezie, 54% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-agụ nyocha tupu ịzụrụ Ihe ọmụma ahụ na-akọwa nkọwa dị iche na B2B na B2C ma mebie mmetụta site na ụdị ngwaahịa.
Tags: bazaavoicendị ahịa mepụtara ọdịnayaNyocha ndị na-azụ ahịanyocha na ntanetịnyocha online ịzụta offlineNyochaizu ohiuGConye ọrụ mepụtara ọdịnaya
Nov 22, 2016 na 7:37 AM
Pụtara ìhè post!
N'ezie, ihe omuma a nke ị nyere zuru oke iji ghọta otú ndị na-azụ ihe na ndị a si etinye ROBO. Nke a nyere oke aka.
N'ihi na amataghị m na ROBO na-atụgharị dị ka ọkọlọtọ n'ime njem ndị na-azụ ahịa na nnukwu ohere maka ụdị ndị ahịa na ndị ahịa nwere ebumnuche nke imeziwanye nghọta ha n'ụzọ doro anya n'ụzọ ndị zụtara ha si azụ ahịa.
Daalụ nke ukwuu Douglas!
Enwere ekele dị ukwuu maka ozi bara uru dị otú ahụ.